‘छक्का पन्जा २’ को पोस्टरमा को को अटाए ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywood‘छक्का पन्जा २’ को पोस्टरमा को को अटाए ?
September 3, 2017 Keshab Khadka Kollywood 0
असोज ११ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’को नयाँ अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। दिपाश्री निरौलाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रको सार्वजनिक दुईवटा गीत बाट निकै नै चर्चा कमाउनुको साथसाथै बिबादमा पनि आएको छ । उक्त्त चलचित्रको पोष्टरमा चलचित्रका मुख्य कलाकार हरु : प्रियंका कार्की, दिपकराज गिरि, बर्षा राउत, स्वस्तिमा खड्का, स्वरूपपुरुष ढकाल, जितु नेपाल, केदार घिमिरे (माग्ने बुढा) देखिएका छन ।